Ikhaya / Blog / Ukukhula Kwe-371% VS 70% Yehla! Ngabe Umncintiswano Womakethe Wendawo Yonke Yangasese Usufinyelele Esigabeni “Esimhlophe Esishisayo”?
Ukukhula Kwe-371% VS 70% Yehla! Ngabe Umncintiswano Womakethe Wendawo Yonke Yangasese Usufinyelele Esigabeni “Esimhlophe Esishisayo”?
2021 / 09 / 13 UkwahlukanisaBlog 1652 0
Izihloko zezindaba zasekhishini nezindlu zangasese
Muva nje, izinkampani ezimbili ezihlobene nayo yonke indlu yokugezela (eyaziwa nangokuthi yonke indlu yokugezela noma indlu yokugezela ehlanganisiwe) - iHuida yokugezela neSeagull Sumitomo bakhiphe imiphumela yabo yakamuva yezezimali. Badalule ngokulandelana imininingwane yemali engenayo yesigaba engxenyeni yokuqala ka-2021. Imali engenayo ye-Huida sanre ware yonke yokugezela inyuke ngo-370.95%, kanti imali engenayo yemikhiqizo efanayo yeSeagull Sumitomo yehle ngama-69.63%. Ezinye izikhungo zibikezela ukuthi ngo-2025 usayizi wonke wemakethe yokugezela uzofinyelela kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-16.5. Ukwanda okuqhubekayo kwemakethe kudonse izinkampani eziningi nemali yokungena. Imininingwane ehlukene yemali engenayo yebhizinisi ingaba uphawu lwayo yonke imincintiswano yemakethe yokugezela engene esigabeni esishisayo.
Imali engenayo yonke yaseHuida inyuke kakhulu ngo-370.95%
Ngokombiko we-Huida yokugezela okhishwe unyaka nonyaka, inkampani ithole imali engenayo yokusebenza engu-1.743 billion yuan engxenyeni yokuqala yonyaka, okuyisibalo esikhuphuke ngo-32.38%. Phakathi kwabo, yonke imali engenayo yokusebenza yokugezela kwakuyi-yuan eyizigidi ezingama-55, ukwanda okuphawulekayo kwe-370.95% esikhathini esifanayo ngonyaka odlule, kubalwa u-3.18% wemali ephelele. Ngaphezu kwalokho, njengesiteshi esibalulekile sokuthengisa ukuxhasa lonke ibhizinisi lokugezela, indawo yokugezela yaseHuida engxenyeni yokuqala yemali engenayo yesiteshi ifinyelele kuma-yuan ayizigidi ezingama-421, ukwanda ngo-23.52%.
Iyunithi: izigidi ezingama-yuan
Product imidlalo Imali engenayo evela kubhizinisi eliyinhloko esikhathini sokubika Ushintsho lonyaka nonyaka Amaphesenti wemali eyinhloko yebhizinisi
Izinto zobumba zenhlanzeko 89, 577. 08 23. 72% 51. 82%
Phakathi kwabo: impahla ehlanzekile ehlanzekile 18,873. 43 102.24 10. 92%
Impahla yenhlanzeko isiyonke 5, 489. 53 370.95% 3. 18%
Ikhabethe lokugeza 13,097. 35 4 & 86% 7. 58%
Izingxenyekazi zekhompyutha ze-Hardware Ware 29,105. 53 39. 73% 16. 84%
Abanye 11,164.69 21.28% 6. 46%
Imbuyiselo ephelele yebhizinisi eliyinhloko 172,851.19 32. 48% 100.00%
Igumbi lokugezela laseHuida likhule ngaphezu kwama-370% engxenyeni yokuqala yemali engenayo yonke yokugezela
Cishe kuyo yonke indlu yokugezela, uHuida usanda kuba nezenzo eziningi ezibalulekile. Ngobusuku bango-Agasti 3, igumbi lokugezela laseHuida limemezele ukuthi ukwanda kwemali ehlongozwayo okungekho ngaphezu kwezigidi ezingama-200 zama-yuan eBeiliu City, iShengda New Materials Co. UShengda. Ukutshalwa kwezimali kwaseHuida kuleli cala ngokusobala akugcini nje ngokukhulisa ukukhiqizwa kwamathayili. Imikhiqizo yokugezela yaseHuida ifaka amasistimu wethayela nezinhlelo ze-SMC, kanti nokusetshenziswa kwezindlu zangasese zephaneli yedwala kuyanda. Ngemuva kokukhuphuka kwemali, iphethe okungekho ngaphansi kwama-70% wemali yeShengda entsha. Ukutshalwa kwezimali kwaseHuida kuleli cala ngokusobala akugcini nje ngokukhulisa ukukhiqizwa kwamathayili. Imikhiqizo yokugezela yaseHuida ifaka amasistimu wethayela nezinhlelo ze-SMC, kanti nokusetshenziswa kwezindlu zangasese zephaneli yedwala kuyanda. Ukwanda kwemali ngokusobala futhi kufanelana nokuthuthukiswa kwendawo yokugezela kaHuida kuyo yonke inqubo yezinkampani zokugezela.
Umqondo weHuida yonke indlu yokugezela
Kusuka esiteshini, ngokusho kwezindaba ezikhishwe yi-Huida yokugezela ngo-Agasti 25, inkampani isanda kuwina isicelo esithi "iLong Lake Group ngonyaka ka-2021 - 2023 womqhele wefulethi leSMC uhlelo lonke lokuqoqa iphrojekthi yokugezela". Kubikwa ukuthi iyabandakanyeka kuphrojekthi yokuthuthukiswa kwezindlu zezindlu eziqashisayo zenkampani ethengisa izindlu. Ngaphezu kwefulethi laseLonghuguan, uHuida usanda kufakwa esikhungweni sezindiza saseSichuan, ekhaya lomakhi weXiongan, efulethini laseShijiazhuang Huangzhuang nakwamanye amaphrojekthi abalulekile. Ngaphezu kwefulethi laseLonghuguan, uHuida usanda kufakwa esikhungweni sezindiza saseSichuan, ekhaya lomakhi weXiongan, efulethini laseShijiazhuang Huangzhuang nakwamanye amaphrojekthi abalulekile. Ukuhlelwa kwesiteshi okuzungeze yonke indlu yokugezela kwenziwa ngempumelelo.
Isaziso somphakathi sokuwina indawo yokugezela yaseHuida
Imali engenayo yeSeagull Sumitomo yemikhiqizo efanayo "ukuncipha" cishe kwama-70%
Ngakolunye uhlangothi, uSeagull Sumitomo uphinde wakhipha umbiko wakhe waminyaka yonke kusihlwa ngo-Agasti 24. Ngokwalo mbiko, isigamu sokuqala seSeagull Sumitomo sathola imali yokusebenza eyi-1.983 billion yuan, ukwanda ngo-50.17%. Phakathi kwazo, yonke imali engenayo yesigaba sokugezela yayingu-0.26 billion yuan, ukwehla kwe-69.63% esikhathini esifanayo ngonyaka odlule, kubalwa kuphela u-1.31% wemali ephelele engxenyeni yokuqala.
Isikhathi sokubika samanje Isikhathi esifanayo sonyaka odlule Ukwanda noma ukwehla konyaka nonyaka
Inani le Isabelo semali yokusebenza Inani le Isabelo semali yokusebenza
Imikhiqizo ye-Hardware Faucet 1,224,449,250.90 61.74% 852,088,803 」7 64.53% 43.70%
Imikhiqizo yasekhaya ehlakaniphile 82,137,189.36 4.14% 48,495,995.33 3.67% 69.37%
Imikhiqizo yobumba yobumba 105,274,145.70 5.31% 69,475,496.35 5.26% 51.53%
Indlu yokugezela ephelele 26,034,399.59 1.31% 85,713,709.96 6.49% -69.63%
Amakhabethe enziwe ngokwezifiso 131,197,274.24 6.62% 97,494,226.96 7.38% 34.57%
I-Seagull Sumitomo yehle cishe ngama-70% engxenyeni yokuqala yayo yonke imali yokugezela
Ngokwakheka okusebenzayo kwayo yonke i-Seagull yokugezela eminyakeni yamuva, ukwehla kwemali engenayo yesigaba bekungalindelekile. Kuyaqondakala ukuthi iSeagull Sumitomo yaqala ukufaka yonke imali engenayo yesigaba sokugezela embikweni wezezimali ngonyaka we-2018. Eminyakeni emithathu kusuka ku-2018 kuya ku-2020, imali engenayo yesigaba yayingu-0.68 billion yuan, 183 million yuan kanye no-203 million yuan, ngokulandelana, ukwanda kwe-100%, 170.22% kanye ne-11.02%. Engxenyeni yokuqala ka-2019, kube nokwanda kwama-382.51%. Ngaphezu kwalokho, yonke imali engenayo yesigaba sokugezela ibalwa ngo-3.05% wemali ephelele ngo-2018, yaya ku-6.09% ngo-2020.
(Kususelwa kudatha yombiko wezezimali kaSeagull Sumitomo)
Kusukela engxenyeni yokuqala ka-2020, imali engenayo kaSeagull Sumitomo kuso sonke isigaba sokugezela yehle, yehla ngo-7.91% esikhathini samanje. Engxenyeni yokuqala yalo nyaka, iqhubekile nokwehla kwayo, ngenzuzo yehle ngo-69.63% kanye nokubalwa kwe-1.31% yemali ephelele. Kepha uSeagull Sumitomo akazange azichaze izizathu zokwehla kwemali engenayo kulesi sigaba.
Imikhiqizo yokugezela yasolwandle
Kuyaqondakala ukuthi iSeagull Sumitomo yaqala amalungiselelo ngo-2015 ukungena enkambini yangasese yangokwezifiso. Ibhizinisi njengamanje linemikhiqizo enjengeNestle neFrontier, kanye neQingdao, iSuzhou, iZhuhai, iJiaxing kanye nezisekelo eziningi zokukhiqiza ezihlakaniphile. Eminyakeni yakamuva, ithole nezinkampani ezifana neJacopolo, Guangdong Nestle's, Seagull Champion neDatong Nai ukuqinisa lonke ibhizinisi lokufaka. u-seagull Sumitomo uthe kulo mbiko uzoqinisa izindlu zangasese eziphelele esikhathini esizayo ukuhlangabezana nesidingo sokwenza ngokwezifiso indlu yangasese yonke. Izokwengeza futhi ibhizinisi layo liye emahhovisi okuhlala, eToC, e-EPC nakwezentengiselwano.
Usayizi wemakethe uzofinyelela kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-16.5, futhi umncintiswano uya ngokuya ushuba ngokwengeziwe
Uhlangothi olulodwa lukhule ngo-370.95% kanti olunye uhlangothi lwehle ngo-69.63%. Lokhu kungabangelwa ukwehluka ngesikhathi sokungena kanye nemodi yokuthuthuka kanye nesisekelo sokuthuthuka kwezinkampani ezahlukahlukene, kepha futhi kukhombisa ukuncintisana okunzima embonini. Ngokusho kwegatsha lokwakha i-Guangdong Provincial Materials Industry Association Association lisanda kukhipha "iphepha elimhlophe lokuthuthukisa izindlu zangasese ezingama-2021", kulindeleke ukuthi ngo-2018-2025, imakethe yokufaka isicelo sokugezela (ihhotela / ifulethi / indawo yokuhlala) isiyonke izokwanda isuke ku-1.6 billion yuan iye ku-16.5 billion yuan, ngezinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe elingu-39.6%.
Ngaphansi kokunwetshwa kwemakethe, izinkampani eziningi ziye zasheshisa ijubane lokungena. NgoMeyi kulo nyaka, Panasonic ekhonjiswe eShanghai Kitchen & Sanitary Show ukudala umkhiqizo wonke wokugezela ngokubambisana noWishi Sumitomo, kulandelwa ukukhishwa kwezikhala eziyisihlanu ezinkulu, kubandakanya nayo yonke indlu yokugezela. Ngo-Agasti nonyaka, Hai Li yokugezela yamukele ithimba elivela eNew City Holdings, okukhombisa ukubambisana okuhle phakathi kwalezi zinkampani ezimbili. Kubikwa ukuthi njengamanje, yonke imikhiqizo yokugezela yaseHaili ibimiswe kumaphrojekthi amaningi ezitolo zeNew City Holdings njengeXi'an Fengshi Joy Mansion. Emperor Sanitary Ware's lonke ibhizinisi lokufaka nalo lithuthuka ngokushesha. Ngaphezu kokubambisana kwayo okujulile ne-United States Property, ibuye yafinyelela ekubambisaneni kwamasu nezinkampani ezingaphezu kwezi-20 zangempela ezifana ne-Evergrande, Poly, Vanke, Beyoncé neZhonghai.
Izikhala ezinhlanu ezinkulu ezikhishwe yiPanasonic zifaka yonke indawo yokugezela
Umbono ukhuliselwe yonke insimu yomhlangano. Izinkampani eziningi zisanda kuncintisana nokwakheka ngokutholwa nokubambisana - IShell Finder uhlose ukuchitha ama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisishiyagalombili ukuthola i-8% yokulingana kwe-Shengdu Home Furnishing. I-Jingdong 'Ukutshalwa kwezimali ngamasu kusanda kusheshisa lonke ibhizinisi lokufaka iShangpinzha. I-Oppein ihlangene ngezandla namabhizinisi amaningi wokufaka ukuvula imodeli entsha yamabhizinisi "wokufaka ngokwezifiso + wokufaka" ngokuwina konke ukufakwa. Ukubambisana phakathi UZbom noHushang Minghu ifuna ukwandisa ngokushesha yonke imakethe yokufaka. Lesi sikhathi ake yonke imakethe yokufaka isiphenduke isithandwa senhlokodolobha.
Ngokwesimo sokuncintisana okushisayo, kulindeleke ukuthi izimo zebhizinisi ezihlukile zibe yinto ejwayelekile. Njengenkampani, kubalulekile ukugcina ukusimama kwentuthuko. Mhlawumbe kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuphuma okuqhubekayo ngaphansi kwemakethe ekhulayo nokuma uqine ngaphambi kokuma ubude.
Edlule :: Izeluleko Eziyisikhombisa Zokwenza Amathayili Wendawo Yokugeza Ahlale Isikhathi Eside Olandelayo: Ingabe Ukukhanyisa Esigumbini Sakho Sokugeza Kungokwanele?
2021 / 09 / 28 518
2021 / 09 / 27 559
2021 / 09 / 25 611
2021 / 09 / 25 2192
2021 / 09 / 24 738